खोप किन्न दातासँग हात फैलाउँदै सरकार - Akhabarpatra
खोप किन्न दातासँग हात फैलाउँदै सरकार
प्रकाशित :6महिना अगाडि
विज्ञ भन्छन्, ‘तत्काल प्रक्रिया नथाले नपाइन सक्छ’
अखबारपत्र:काठमाडौँ, मङ्सिर २६ । कोरोना खोप खरिद गर्न चाहिने रकम जोहो गर्न सरकारले व्यक्ति र संस्थागत सहयोग उठाउने भएको छ । यसअघि निष्क्रिय राष्ट्रिय खोप कोष नियमावलीमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सहयोग जुटाउन लागिएको हो ।
कोषमा सरकारले निश्चित रकम राखेर दाताहरुलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुलाई आग्रह गरिसकेका छौँ,’ मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने, ‘दाताले स्वास्थ्यका लागि अन्य क्षेत्रमा दिने सहयोग पनि कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।
कोरोना खोप खरिद गर्न कम्तीमा ४८ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । कोषमा राख्नेबाहेकको रकम पनि थप जुटाउन सार्वजनिक रुपमै सरकारले आह्वान गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यस विषयमा तयारी गर्न नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा टोली बनाएको छ ।
यता, विज्ञहरुले खोप खरिदका लागि जतिसक्दो प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मुलुक सुहाउँदो खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरी आपूर्ति सुनिश्चित नगरिए खोप बनिसकेपछि ल्याउन ढिलाइ हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इन्म्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनमा कोभाक्स सुविधाअन्तरगत सहुलियत मूल्यमा आउने (जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने) भनिएको बाहेक अन्य खोप किन्न सरकारले तयारी गरेको छैन ।
गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् : दीपक मनाङेसहित चार विना विभागीय मन्त्री
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त, गुरुङले दिए बधाई
रामेछापको खनियापानीमा खानेपानी आयोजना अलपत्र
२४ घण्टामा ३३८४ जना संक्रमित थपिए, कोरोना संक्रमणबाट थप ६१ जनाको मृत्यु
काँग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध शुक्रबार दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिए
साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित सरकारको कर्जा नीति बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न